यो बर्षको देशभरका पाँच सर्वोत्कृष्ट किसान ,को को छन ?? हेर्नुहोस | Biswas News
यो बर्षको देशभरका पाँच सर्वोत्कृष्ट किसान ,को को छन ?? हेर्नुहोस
सरकारले यो बर्ष देशभरबाट उत्कृष्टमा छनौट भएका पाँच जना किसानलाई मंगलबार राजधानीमा सम्मान गरेको छ ।
कृषि विकास मन्त्रालयले छनौट भएका पाँच जना किसानलाई उत्कृष्ट राष्ट्रपति कृषक पुरस्कार प्रदान गरेको हो । मन्त्रालयले सिंहदरबारमा आयोजना गरेको सम्मान कार्यक्रममा राष्ट्रिय किसान आयोगका अध्यक्ष चित्रवहादुर श्रेष्ठले पाँचै जना किसानलाई नगद र कदरपत्रसहित सम्मान गरेका थिए । मन्त्रालयले सर्लाहीको हरिपुर नगरपालिकाको पिडारी टोलका माछा पालक किसान अफजल हुसैंनलाई यो बर्षको लागि सर्वोत्कृष्ट पुरस्कार प्रदान गरेको छ । उनलाई नगद दुई लाखसहित कदरपत्रका साथ सम्मान गरिएको थियो । पुरस्कार ग्रहण गर्दै हुसैंनले सरकारले कार्यान्वयनमा ल्याएको बिमा र बैंक ऋण सुविधा ग्रामिण भेगका किसानले पाउन नसकेको गुनासो पोखेका थिए । उनले भने, ‘सरकारले ल्याएको बिमा र बैंक ऋण सुविधा पहुँच भएका ठूला शहरियाका किसानले मात्रै पाउदै आएका छन् । उक्त सुविधा प्राप्त गर्न हाम्रो लागि आकाशको फल आँखा तरी मरजस्तै बनेको छ । बिमा गराएका कतिपय किसानले बिमा रकम क्षतिपूर्ति पाउन धाउदा धाउदै थाकिसके तर अहिलेसम्म पाउन सकेन ।’ सरकारले पाँचथर मिक्लाजुंग गाउँपालिकाको कुरुम्बा टोलका इन्द्रकुमारी लावतीलाई सुन्तला खेतीसहित एकीकृत खेतीतर्फ, डडेलधुराको अजमेरु गाउँपालिकाका खडकसिंह विष्टलाई बाख्रापालनतर्फ, नवलपरासी हुप्सेकोट गाउँपालिका वेलहानी टोलका थमवहादुर रजाली मगरलाई तरकारी खेतीतर्फ र बाँके नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाका सुमेरसमशेर जवरालाई जनही एक एक लाखको नगदसहित उत्कृष्टको कदर पत्र प्रदान गरेको थियो । किसानी पेशा र कृषि क्षेत्रको सम्मान गर्ने उद्देश्यले गत् आर्थिक बर्ष २०७०।७१ देखि यो पुरस्कार प्रदान गर्न लागिएको हो । कार्यक्रममा कृषि सचिब डा. सुरोज पोखरेल र पशुपन्छी मन्त्रालयका सचिब डा. युवकध्वज जिसीले शुभकामना दिएका थिए ।
Previous articleशैक्षिक क्षेत्र सुधारका लागि निजी क्षेत्रलाई अधिकार
Next articleभरतपुर १९, पुन मतदान कि मतगणना ??? अदालत र अयोगमै अन्योलता, सुनुवाइ फेरी स¥यो